Ilmuhu ma cuno xannaanada
Carruurta Hay'adaha carruurta
Adiga oo siinaya ilmaha xanaanada, waalidiin badan ayaa ogaanaya in ilmuhu uusan rabin inuu cuno xannaanada. Iyo, nasiib daro, inta badan waalidku waxay ka cabanayaan in ilmahoodu aanu cunin xannaanada, laakiin dhacdadani maaha mid aan sal lahayn. Carruurta bilaabay in ay tagaan xanaanada caruurta waxay yeelan karaan sababo dhowr ah oo aan cunin.
Sababaha diidmada cunnida ee cunugaagu u cuno xannaanada
Sababta ugu muhiimsani waxay tahay in sariirta ay la kulmaan walaac weyn sababtoo ah bilawga booqashada xanaanada, sidaas darteedna wuxuu diidey inuu cuno. Xaaladdan, xaalad kasta, waa suurtagal in la farageliyo su'aasha ah qaadashada cuntada iyo in cunugu cuno. Xaaladdan, waqti keliya ayaa kaa caawin kara isbedelka xaaladda. Dhowr usbuucyo, sida ficilku muujiyo, ilmuhu wuxuu u isticmaali doonaa koox cusub oo si xamaasad leh u cuni doona dhammaan carruurta.
Inta badan, cuntada beerta ayaa si weyn uga duwan cuntada cuntada, sidaa darteed cunug aan aqoonin isaga ayaa saxaradu ka cabsan kartaa inuu cuno. Xaaladdan oo kale waa lagama maarmaan in la hormariyo, bilo yar ka hor bilowga booqashada xanaanada, waalidiinta waxay ka bilaabaan guriga si ay u diyaariyaan suxuullo la mid ah kuwa lagu adeegi doono beerta. Haddii hooyooyinka had iyo jeer ay ku kariyaan suxuunta guriga, markaa cunuga caadi ahaan ma haysto dhibaatooyin marka uu booqanayo xanaanada caruurta dhibaatooyin cunto. Laakin haddii cunuggu uu caadeysto inuu cuno suxuunta delicious, waxyaabaha ka soo jeeda "barmiilka iyo baakooyinka", markaas dhibaatooyinka looma diidi karo si hubaal ah.
Dhibaato kale oo caan ah oo aan cunin cunug ku jira xanaanada caruurta ayaa ah mid aan awood u lahayn inuu cuno qaaddo. Haddii xirfad sidan oo kale ah uusan wali baran ilmaha, wuxuu si fudud u cuni doonaa beerta. Macallimiintu mararka qaarkood ma heystaan ​​wakhti ay ku taxadaraan habsocodka quudinta carruurta oo idilna ilmuhu wuu gaajoonayaa. Sidaa daraadeed, si looga fogaado dhibaatooyinkaas, waa lagama maarmaan inaad ilmahaaga bariso horey si aad u cunto cunid udoon leh.
Laakiin sidoo kale waxay dhacdaa in ilmuhu cuno sababta oo ah ururkiisa cuntadiisa ayaa lagu go'aamiyey cunto qaadasho. Tusaale ahaan, hooyada guriga joogta xilliga cuntada, waxay si joogto ah u keeneysaa cunugeeda miiska (caydhinta laydhka, cillad la'aanta, xiiritaanka, iwm.). Sidaa daraadeed, hannaanka xannaanada carruurta cunnooyinka cunugga waa mid fudud "adag". Xaaladdan, barayaashu waa inay u arkaan habka ugu wanaagsan ilmaha.
Waxa la sameeyo haddii ilmuhu diido inuu cuno xannaanada
Haddii cunugu ugu horeyntii cuno xannaanada, ka dibna ha ku qasbin ama ha ku xad gudbin isaga oo dhan, si uusan ilmuhu uga gudubin cabsi ama mamnuuc. Si tartiib ah, markii uu caadaysto bii'ada cusub, wuxuu bilaabi doonaa inuu wax cuno. Weydii macallinka inuu ilmahaaga ku dhejiyo miiska iyaga oo carruurta cunaya si dhakhso ah oo wanaagsan. Waxaa laga yaabaa in ilmuhu eego iyaga oo waliba isku day in uu wax cuno, maxaa yeelay caruurtu waxay isku soo noqdaan midba mid kale. Haddii ilmahaagu bilaabo inuu wax cuno cunnuga xanaanada, ka dibna u hubso inaad ku ammaanto isaga.
Waalidiintu waa inay baraan ilmahooda inay ixtiraamaan kuwa isku dayay inay ku karsadaan jacaylkan ama saxankaas. Si aad u sharaxdid isaga oo diidaya inuu wax cuno macnaheedu waa in la xushmeeyo dadka. Haddii aad cunto ugu yaraan cunto yar - ka dib markaad u mahadcelisid mahadnaq. Weydiiso ilmo inuu kugu caawiyo diyaarinta saxan, ka dibna u hubso inaad ku ammaanto isaga. Kobcin wanaagsan ee kiiskan ma ogolaanayo in ilmahaagu ka tago cuntada la soo jeediyay ee xanaanada.
Nidaamka quruxda badan waa in uu ahaado cunto, laakiin ha fogeyn. Cuntada waa in aysan ku dhicin "muujin" marka ilmuhu soo dhaweynayo. Tusaale ahaan, isticmaal khiyaamo kala duwan oo leh badeecooyin iyo diyaarado dhoobo ah, ka hor ciyaaro heeso, iwm. Waxaad u baahan tahay inaad ogaatid in macalinka xanaanada caruurta uusan sameyneynin, sababtoo ah waxaa jira carruur badan oo kooxda ka tirsan. Haddii cunuggu caadaysto sida cuntada, ma aha wax la yaab leh inuusan rabin inuu cuno xannaanada. Sidoo kale maaha mid ku haboon in lagu abaabulo tartamada farshaxanka ee guriga. Tani waxay waxyeello u geysaneysaa ilmahaaga, sababtoo ah cuntada ku jirta xanaanada caruurta uma badna in ay ka farxiso cunuga, maadaama uusan si fudud loogu isticmaalin.
Waa hagaag, haddii aad haysato walaalka ama walaasha, caruurta marwalba way fiicnaanayaan marka ay jiraan dad badan oo miiska saaran. Haddii aysan jirin caruur kale, waxaa lagu bedeli karaa alaabta waaweyn, si ilmuhu u ogaado sida loo cuno xannaanada. Sidoo kale u sharax sida cunnuga sida loo cuno, si aanay u dhibin dadka kale miiska.
Ilmuhu wuxuu cuni doonaa xannaanada carruurta la'aantiisa, haddii uu si fiican ugu diyaar garoobayo inuu xaadiriyo xanaanada. Haddii waalidku waqti u qaato diyaarintaan, markaa dhibaatooyinka cunto cunida beerta waa inaysan soo bixin.
Ciyaarta banaanka carruurta ee xannaanada carruurta
Ilaalinta xuquuqda ilmaha ee xanaanada
Dhibaatooyin weyn ee arday yar
Falanqaynta qalabka ilmaha ee xannaanada carruurta
Maxay waalidka hodanka ah u siinayaan carruurtooda dugsiyada gaarka loo leeyahay?
Sababaha waxqabadka tacliinta liita
Ilmuhu ma rabo inuu tago dugsiga
Cordon Blue ka soo digaag digaag leh ham iyo jiis
Maxaa la sameeyaa qaniinyada qaniinyada?
Jensen - joodariyaasha hurdo weyn
Daryeelka gacmaha iyo ciddiyaha, daaweynta dadka
Balsi ka soo kalluumeysiga
Caanaha qoyan ee la yiraahdo vanilj
Sida loo daryeelo nasiib darrada ah ee gabbaadka
Guriga Xagaaga Summer
Dufan ka soo ukunta ukunta
Soosaarka Pion-ka ee habboon
Kalluunka khudaarta cagaaran
Mackerel ee gacanta
Dhalashada ilmo weyn - ma u fiican tahay?
Maxaa u jiidaya caloosha hoose intii uurka lahayd?
Kish leh digaag iyo isbinaajka
Gold of Egypt: isweydaarsi cusub oo ka yimid CND